बजेट खर्चका लागि बाटो खुल्दै
एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक बहुमतका आधारमा पास
२०७८ असोज, ५
काठमाडौं । सरकारी ढुकुटीबाट भदौ ३१ पछि रकम खर्चिन नपाएको अवस्थामा प्रतिनिधसभामा प्रतिपक्षीको नाराबाजीबीच प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छ । यसबाट सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।
बजेट खर्च गर्न कानूनी अड्चन आएसँगै बजेटसँग जोडिएका विषयलाई संसद्बाट द्रुतगतिमा टुंग्याउने नीतिका साथ सरकार अघि बढेको छ । यसै क्रममा अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको बजेटसँग सम्बद्ध विनियोजन विधेयक संसद्बाट पास भएको छ ।
एमालेको अवरोधकै बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते (शुक्रवार) आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमा सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेटमा संशोधन गर्दै केही आयोजना खारेज गर्नुका साथै बजेटको अंकसमेत घटाएको थियो ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १४ अर्ब ७४ करोडले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो ।
कसरी भयो विनियोज विधेयक पास ?
सोमवार एमाले सांसदले बैठक शरू हुनासाथ नाराबाजी गरे पनि सभामुखले संसद्लाई नरोकी सीधै बजेट छलफलतर्फ उन्मुख गराए ।
बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा मात्रै बैठक केन्द्रित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच बजेटसम्बन्धी छलफल चले पनि विगतमा जस्तै लामो छलफल भएन ।
विगतमा विनियोजन विधेयकमाथि झन्डै १ महीना लामो दफावार छलफल हुनेगरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख सापकोटाले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा बजेट छलफललाई अघि बढाए । सभामुखले नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललाई बजेटमाथि छलफल गर्न १२ मिनेटको समय दिएका थिए ।
सांसद सुवालले भने, ‘विनियोजन विधेयकबारे संसद्मा १ महीना छलफल हुन्थ्यो । अहिले १२ मिनेटको समय दिइएको छ । यसले संसद् देश र जनताप्रति जवाफदेही नभएको स्पष्ट हुन्छ ।’ सुवालले बजेटमाथि छलफलभन्दा बाहिरका प्रश्न उठाएका थिए र सभामुख सापकोटाले सबै मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफलमा नाम टिपाउन सांसद्हरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर, कुनै सांसदले नाम नटिपाएपछि सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सुवालले विभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका शीर्षकमा रहेका खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गर्दै विनियोजन विधेयक पारित भएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
सुवालले दु्रतमार्ग, वाइडबडीजस्ता विषयमा अर्थमन्त्रीसँग स्पष्टीकरण समेत मागेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले पनि साधारण ढंगले सुवालको प्रश्नको जवाफ दिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल टुंगिएको जानकारी दिए । आर्थिक विधेयकको सन्दर्भमा पनि यही क्रम चलेको थियो ।
सरकारले तत्काल खर्च गर्न भने पाउन्न
बजेट पारित भए पनि सरकारले तत्काल खर्च गर्न भने पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । कानुनतः प्रतिनिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता आएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि औपचारिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा आउँछ । राष्ट्रिय सभाको बैठक मंगलवार बस्दै छ । सम्भवतः सोही बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट आउने विनियोजन विधेयक पारित गर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कम्ती २–३ दिन लाग्ने अनुमान सरकारको छ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै अब चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित भएको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै अध्यादेशमार्फत जारी गरेको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले भदौ ३० गते मध्यरातबाट खर्च गर्न नपाउने ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था छ । त्यसयता अधिकांश सरकारी खर्च रोकिएको अवस्था छ ।
सोमबारको संसद् बैठकपछि अर्थमन्त्री शर्माले बजेट लामो समय रोकेर राखेमा सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले प्रतिपक्षको विरोध हुँदैहुँदै पारित गरेको बताए । उनका अनुसार बजेट पारित गर्नु बाध्यता हो । ‘प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं, तर लामो समय बजेट रोकेर राख्यो भने सबै कुरा ठप्प हुने भएकाले सँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले भने । मन्त्री शर्माले नेकपा एमालेसँग प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूले निरन्तर संवाद गरिरहेको पनि बताए । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको कुनै योजना नकाटेको दाबी गरे । बरु आफूले राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेको पनि मन्त्री शर्माले दाबी गरे ।
विद्युतीय व्यापारमाथि नियमन गर्दै सरकार[२०७८ असोज, २५]
दशैंको मासु : उपभोगमा सावधानी नअपनाए विषालु ![२०७८ असोज, २४]
स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन : सरकार कार्यविधिमै अलमलियो, द्विविधा अझै हटेन[२०७८ असोज, २४]
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विविधीकरण[२०७८ असोज, २०]
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य : भारतमा अहिलेसम्मकै उच्च, नेपालमा असर देखिँदै[२०७८ असोज, १८]
राष्ट्रपतिबाट विजयादशमीको टीका ग्रहण[२०७८ असोज, २९]
विजयादशमी : नगद दक्षिणा कि डिजिटल दक्षिणा ?[२०७८ असोज, २९]
दशैंले उत्साह, उमंग र सकारात्मक ऊर्जा थप्ने राष्ट्रपतिको विश्वास[२०७८ असोज, २९]
आज विजयादशमी, टीका थाप्ने शुभ साइत बिहान १० : ०२ बजेबाट[२०७८ असोज, २९]